दाईभाई बिनाको अधुरो तिहार – All top Here
Home/समाचार/दाईभाई बिनाको अधुरो तिहार
दाईभाई बिनाको अधुरो तिहार
सबै जना भाइलाई टिका लगाउन बेस्त थिए । म पनि खुसी थिए किनकी मेरो पनि भाई रहेछ । आमाले मामालाई टिका लगाएको एक एक गरी हेर्दै थिए । मामाको पालो पछि मैले पनि आमा लाई सोधेर भाईलाई टिका लगाउन तेलले छेकेर दैलोमा ओखर एकै चोटीमा फुटाउनलाई बेस्सरी लोहोरोले हानेको एक टुक्रा ओखर उछिटिएर मेरो आँखामा लाग्यो म झसंग भएर ब्युझिए । सपना पो रहेछ । घडी हेरे रातीको २ बजेको थियो । बिपनामा भाई टिका लगाउन नपाए पनि सपनामै भए पनि भाईलाई टिका लगाइदिदै थिए कति खुशी थिए तर सपनामा पनि भाई टिका लगाएर खुशी हुन पाइन ।
टिका लगाइदिए सम्मको सपना देखेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तै भयो । सपनामा पनि भाई टिका अधुरै रह्यो । अधुरो सपना पुरा हुन्छकी भनेर फेरी निदाए तर भाईटिका लगाएको सपना देखिन ।बिहान उठेर उत्तर पटि हेरेको पारी खेतका फाँटमा धान पहेलै भएर बयेली खेल्दै थियो । सयपत्री ,मखमली ढकमक्क फुलेसंगै तिहारले पनि आँगन टेकीसकेको रहेछ । आमा पनि फुलहरु बचाउने तरखरमा देखिन्थे । खै देउसे र भैलेले फुल टिपेर लगी दिन्छन भन्नु हुन्थ्यो । तिहारका बजारहरु धमाधम लाग्दै थिय । सबै घर आँगन सरसफाईमा बेस्त देखिन्थे । जे भए पनि तिहारको रौनकता चारै तिर देखिएको थियो ।
कतै फुलैफुल,कतै झिलिमिली बत्ती,धेरै परिकारका मिठाई,धेउसेभैलो, अनी दिदिभाई र दाजुबहिनीको अटुट सम्बन्धको चार्ड तिहार कस्लाई पो मन पर्ला र ?
मलाइ पनि तिहार औधी मन पर्छ ।
एमपञ्चकको पहिलो दिन कागलाई डाकेर खान दिन,दोस्रो दिन एमराजको द्धारपाले कुकुरलाई माला लगाई पुजा गर्न , तेस्रो दिन बिहान नांग्लोमा पुजाको सामन बोकी अर्काको घरमा गई गाईलाई रंगाई पुजा गर्न, साँझमा झिलिमिली बती बाल्न,आँगनमा रंगोली बनाउदै घर भित्र लक्ष्मी भित्राउन अनि आमा संग सेलटोटी, अर्नसा बनाउन निकै रहर लाग्थ्यो । चौथो दिन गोरुलाई रंगाई पुजा गर्न,े गोबरको गोर्वधन पर्वत बनाई पुजा गर्न पाउदा मन रमाउथ्यो । तर पाँचौ दिनले भने सधै पिडा दिन्थ्यो । किनकी हाम्रो दाजुभाई नै थिएनन् ।
भाइटिकाको दिन सबै जना आःनो दाईभाइलाई टिका लगाउने तयारीमा धौडधुप गरिरहेका हुन्थ्ये । हाम्रो घरमा भने शुनशान हुन्थ्यो । अरुबेला दाईभाई छैनन भन्दा मन बुझथ्यो तर भाईटिकाको दिनमा मन बुझाउन गारो पथर््यो । बहिनीले भन्थी हामी कती अभागी है नत हाम्रो दाईभाई छन नत बुवाको दिदि बहिनी । किन यस्तो भएको होला । बैनिको प्रश्नले म चुप बस्थ,े म संग पनि जबाफ थिएन । पिडा त्यो दिदि बहिनीलाइ पर्छ जस्को कुनै दाजुभाई हुन्नन ।
अलिअलि समाज परिपर्तन हुदै थियो नभएत छोरा नभएको परिवारलाइ समाजले हेर्ने दृष्टी नै फरक हुन्थ्यो,, निकै हेप्थे । छोरा छैन भनेर आफन्त र छिमेकीले हेपेका त्यो दिनहरु आजै हो जस्तो लाग्छ ।
हुनत दाजुभाई नभएका दिदिबहिनीलाई र दिदि बहिनी नभएका दाजुभाईलाई पनि तिहार उतिकै खल्लो लाग्दो रहेछ । त्यहि खल्लोपनलाई कम गर्न होला देउसी भैलो,, डगरमा हालीएका लिंगे पिङ ! राती राती मच्चिन गइन्थ्यो,,,राती पिङ खाली हुन्थ्यो । थाकुनजेल खेलिन्थ्यो ।दाजुबहिनी, दिदिभाई निधारमा सप्तरंगी टिका,माला लगाएर कार्तिकको त्यो चिसो शितलहरमा रातभरी देउसी भैलो खेल्नुको आनन्ददै बेग्ले हुन्छ । मलाई पनि भट्याउनु,,,तिहारको गीत गाउनु, आशिश दिनु राम्रो लाग्छ । छाना माथी घिरौँला के के दिन्छन हेरौला भन्दै घरबेटीलाई उठायो । देउसी खेल्दै १४ अञ्चल ७५ जिल्ला पुग्नु पर्छ भन्न अझै छोडिएन । आशिष पनि दक्षिणा हेरी हेरी दिईन्थ्यो। धेरै दक्षिणा दिनेलाई सुनकै घर होस थोरै दिनेलाई टाली र खरको छानो होस पनि भनियो सानामा ,,, अबत समय सान्र्दभिक आशिष दिन मन पर्छ ।
एक साल त ४ रात झिपिक्क नगरी देउसी खेल्न गाको हप्ता दिनसम्म सपना बिपना मै देउसी मात्र भनिँथ्यो । हजुरबाले उखान भन्नुहुन्थ्यो, “एक रातको अनिधोले सात रात पिरोल्छ रे” होकीे जस्तै भयो । देउसीको नशाले निन्द्रै पुगेको थिएन । कति पटक खाना पकाउदा चुलैमा निदाएर तरकारी पनि डढाईयो । घाँस काट्न जादा बारीमै निदाइथ्यो र आमाले गाली गरेर उठाउदा भट्याको जस्तो लागेर देउसिरे,देउसिरे पनि भनियो ।
दिदिभाई र दाजुबैनिले मात्र मनाउन मिल्ने तिहार, दिदिबहिनी र दाजुभाई विच पनि मनाउन मिले कती रमाइलो हुन्थ्यो होला है, कसैको पनि निधार खाली हुने पनि थिएन भन्ने बिबेकको अभिब्यक्त्तीले म पनि झस्कीए ,,,,
बास्तमै तिहार दाजुभाई र दिदिबहिनी विच पनि मनाउन पाउने चलन भईदिएको भए, भाइ टिकाको दिन कसैको परिवारमा खिन्नता आउने थिएन होला । बहिनीले दिदिलाई भाइ टिका र भाईले दाईलाई भाईटिका लगाइदिने चलन भईदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होला तिहार ।
काठमाडौंमा रक्सी खाएर कार चलाउँदा कार सडकमा उत्तानो